American Eagle Lady Liberty Coin 1 oz (Taona tsy mitongilana) Volamena tsara 22K - Popular Jewelry
American Eagle Lady Liberty Coin 1 oz (Taona tsy mitongilana) Volamena tsara 22K
Logam sarobidy: Vita tamin'ny volamena madio 91.67%, milanja 1 Oz.
Novokarin'i Etazonia Mint fanta-daza.
Toe-javatra tsy manam-paharoa mamiratra.
Ny volafotsy isam-batan'olona dia tonga ao anaty flast plastika. 20 be dia be no tonga ao anaty fantsona navoakan'ny mint.
Mitondra antokom-pivavahana $ 50 USD.
Nankatoavina hampidirina ao amin'ny IRA.
Vola kely ara-dalàna any Etazonia miaraka amin'ny fahadiovana sy lanja tohanan'ny governemanta amerikana.
Obverse: Lady Liberty miaraka amin'ny fanilo eo amin'ny tanany ankavanana ary sampana oliva amin'ny tànany ankavia mandroso miaraka amin'ny volony mikoriana eo ambadiky ny fiposahan'ny masoandro sy ny tranon'ny Capitol.
hanova: Ny voromahery volamena lahy mitazona sampan'oliva dia manidina ambonin'ny akany izay misy voromahery volamena vavy sy ny zana-trondro, volavolan'i Miley Busiek.
savaivony: 32.7 mm *
Lanja: Mitovy amin'ny 1 Troy Ounce an'ny 24K (99.99%) (~ 33.93 Grams x 22K (91.67%) *
Azafady mba mifandraisa aminay raha manana fanontaniana bebe kokoa momba ny habe na ny fomba sy ny fisafidianana ianao, ny fahafaha-manao sy ny fepetra manokana ary ny personalizasafidy.